एक अपरिपक्व प्रेम | काव्यालय
एक अपरिपक्व प्रेम | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
एक अपरिपक्व प्रेम
by निरज पन्त July 11, 2020
उज्यालो दिन छ । आकाश यति बिघ्न उघ्रेको छ कि घाम टिलिक्क टल्केको छ । यो शहर बन्दै गरेको गाउँ हो तर बासिन्दाहरुले आफूलाई शहरियाको दर्जा दिइसकेको अवस्था छ । अग्ला घरहरु सुनसान छन् । होचा घरहरुमा एकाध मान्छे र लस्करै धोएर सुकाएका कपडा देखिन्छन् । केही बच्चाहरु खेल्दा चिच्याएको आवाज सुनिन्छ । अन्यथा शान्ति छ, मौसम आफ्नै सौकुमार्यमा मदहोसजस्तो देखिन्छ ।
एकदम एक्कासि बाटै बाटो भयानक खोला बग्दै आउँछ । बग्दै आइरहेछ ढुङ्गामुढासहितको बाक्लो भेल । भेलमा बग्दै आइरहेछन् जरा सहित उप्रेका ठूला ठूला रुखहरु, चट्टानका चोक्टाहरु, माटाका ढिस्काहरु, मकैका डाँठ, फर्सिका बेलाहरु, गाइबस्तुहरु, कुकुरहरु, मान्छेका लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा र स्वयम् मान्छेहरुपनि चिच्याउदै, कराउँदै । अग्ला घरहरुबाट सुकिला मानव अमानवताका खित्का छोड्दै हाँसिरहेछन्, त्यो आर्तनादको नाच देखेर । बडा रमाइलो लागिरहेछ उनीहरुलाई यो दृश्य । कोही छन् जो सहानुभूतिका नजरहरुले डाम्दैछन । भेल ऊ भएको तिरै बग्दैछ । दुई धुमिल आकृतिहरु हात तन्काउँदै बग्दै आइरहेछन । उनीहरु उसकेै नाम बोलाउँदैछन् तर उसले भने तिनलाई ठम्याउन सकिरहेको छैन । त्यहि भेलमा बग्दै आइरहेकी छे ‘भावना’ पनि । उनको आँखामा सन्त्रास भने उसले टाढैबाट देख्न सक्छ ।
Art by Julen de Balincourt
ऊ बल्ल तर्सियो । उसको हृदयमा बल्ल कोलाहल बज्यो, अत्यास उब्जियो । ऊ यताउतिका ढुङ्गाहरु बाटोमा थुपार्न लाग्यो । ऊ त्यो बाढी त्यहीँ रोक्न चाहन्छ । ऊ बग्न दिन चाहँदैन उसकी प्रेमिकालाई, उसको प्रेमलाई । थुपार्दा थुपार्दै ढुङ्गाहरु भेल नजिकै पुगिसक्यो । ऊ भागेर पनि कहाँ जाने ?भावनालाई छोडेर पनि कहाँ जाने ? गड्किँदै आएको भेलले, लौ बगायो उसलाई पनि, उसले भावनाका हात समात्नै सकेन । समात्नै सकेन !
ऊ झसक्क झस्किँदै बिउँझियो । उसको शरिर पसिनाले भिजेको छ । पसिना चिउँडोबाट गर्धन हुँदै छातीमा प्रस्ट देखिँदै करङतिर बग्दै छ । पृष्ठभूमिमा मोबाइलको अलार्म बजिरहेको छ । उसले मोबाइल समात्यो, अलार्म अफ गर्यो । बिहानको सात बजिसकेको छ । पाँच बजेको अलार्म स्नुज हुँदै बजिरहन्छ सधैँ यसरी नै तर कानहरुलाई त्यो पचिसक्यो- मस्तिष्कले रियाक्सन नै पठाउँदैन ।
ऊ रातभरी सुत्न सक्दैन । ऊ ईनसोम्नियाबाट ग्रसित छ । खाटमा छट्पटिन्छ, ओल्टिन्छ-पल्टिन्छ, उठ्छ, कोठाको चक्कर लगाउँछ, कुर्सिमा बस्छ, मोबाइल थमाउँछ, इनटरनेटमा झन् डिप्रेसन व्याप्त छ, दिक्दारिन्छ, फेरि खाटमा बस्छ, पल्टिन्छ, खुई…-खुई… कराइरहेको पङ्खा हेर्छ, टोलाउँछ, आफै-आफै आँसुहरु बलेसी हुँदै सिरानीमा तप्किन्छन् । उसले बिर्सिन खोज्दा खोज्दै पनि सम्झनाले डेरा छोड्दैन । हुन त यहाँ बिर्सनु उसैलाई छ जसलाई बिर्सनै सकिँदैन ।
एकदमै खराब गन्ध उसको नाकका पोराहरुमा ठोक्किन पुग्छ । गन्ध पूरा कोठाभरि फेैलिएको छ । दूषण बास्नाले उसको छाती भरिएर आयो, नशाहरु चिरिन थाले, पेट बाउँडिएर मुख सम्म पुग्यो । छि: यस्तो नराम्रो गन्ध उसले कहिल्यै सुँघेको थिएन । शायद कसैको आङ बयल्लिरहेछ । अतिशय भएपछि ऊ हत्त न पत्त पुरानो मैलो टि-सर्ट घुसारेर बाहिरतिर हुत्तियो । एक लामो श्वास फ्याँक्यो, एक लामो श्वास लियो । बल्ल उसलाई रक्तसञ्चार भएको महशुस भयो । बल्ल आँखा उघारेजस्तो भो । एक क्षणलाई मरेर अर्को क्षणमै श्वास फर्केजस्तो भयो ।
रातभरि उसलाई अनिद्राले च्याप्छ । जब आँखा एकछिनलाई झपक्क हुन्छन्, उसलाई त्यो बाढीले झल्याँस्स पार्दिन्छ । कहिलेकाहीँ उसलाई एक युग नै सुतेर उठेको जस्तो लाग्छ भने कहिलेकाहीँ बग्दै बग्दै ऊ कतै अर्कै युगमा पुगेको जस्तो लाग्छ । तर ब्युँझदा उहि उस्तै समय लत्रिरहेको हुन्छ ढोकानेर ।
ती बकैना र टुँडिका रुखहरु त्यहीँ ठिङ्ग हुन्छन्, मन्द तातो हावाले तिनका साना साना पातहरुलाई हानिरहेकै हुन्छ ।
आज तिनको फेदमा सानोतिनो तलाऊ नै छ । त्यो जमेको पानी यो असार लागेपछि महिनाभरि कसै सुक्दैन । त्यसमा भ्यागुताहरुको ट्यारट्यार उसले ब्युँझेर बाहिर निस्केपछि सुन्ने पहिलो आवाज हो । यो असार भ्यागुताहरुको दशैँ हो । एक जोडी भ्यागुताहरु उफ्रँदै घरभित्रबाट निस्कँदै आँगनमै जमेको पानीमा डाइभ हान्छन्- छत्ल्याक्क !
साला भ्यागुताहरुले त आफ्नै घर ठानेका छन् !
“यो प्रेम भन्ने चिज बहुतै अजीवको रहेछ । आजभोलि मलाई जुन महसुस हुन्छ नि, शायद यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । मेरो मन रङ्गीबिरङ्गी चङ्गा भएको छ, उड्दै उड्दै कल्पनाको संसारमा पुग्छु जहाँ अङ्गालोभरी केवल खुशी छन् । प्रिय भावना, म तिम्रो नजरको नशाले अटेसमटेस भरिएको छु । मेरो मन चोर्ने चोर, के गर्दै छौ ?”
सुरतले सेन्ड बटन थिच्यो ।
भावनाले सिन गरी । मेसेन्जरको मुटु ढुक ढुक भइरहेछ । रिप्लाई आउन पनि कति समय लागेको, सुरतले सोच्छ ।
“ए, प्रेम कवि । ” मेसेज टुडुङ्ङ बज्यो ।
कति छोटो रिप्लाई गर्छन् केटिहरु । सुरतले लेख्यो, “प्रेममा त सबै कवि हुन्छन्, भावना”
“खै म भइनँ त”
“तिमी भावना लुकाउनमा परफेक्ट छौ, भावना”
“ल कुनै कुरामा त परफेक्ट रहेछु । “
“आँखाहरुले संकेत भने गरिरहरकै हुन्छन । “
“आँखा लुकाउन सकिन्न क्यारे”
“तिम्रा आँखा आफैमा प्रेम कविता हुन् । “
“त्यसो भए म पनि कवयित्री, तर इमपरफेक्ट कवयित्री !”
“मलाई तिम्रा सबै इमपरफेक्सनहरु परफेक्टली मनपर्छन ्। “
“अरु के के मनपर्छन् मेरो बारेमा?”
“तिम्ले कक्षामा डेढो आँखाले मलाई हेरेको, के के सोचेर आफ-आफै मुस्कुराएको, हेरेक कुरा मनपर्छ मलाई । “
“सबैभन्दा बढीचाहिँ ?”
“मलाई त तिम्रो हर अदा मनपर्छ, म कुन विशेषतालाई अल्ग्याएर विशिष्ट भनुँ !”
“कुनै एक कुरा मात्र भनुपर्यो भने नि ?”
“जब तिमी बुझेर पनि नबुझेझैं गरेर ‘हो र’ भन्दै टाउको हल्लाउँछौ नि, त्यो रियाक्सन क्या हेर्न लायक हुन्छ, बडो कलात्मक एक्टिङ गर्छ्यौ ।”
“ल, अब म कलाकार नि भएँ । “
“मेरो दिल जो नाट्यशाला बनाएकी छ्यौ ।”
“तिमी पनि त मेरो दिलमा खैलाबैला गरिरा’छौ ।” (मेसेजको पुच्छरमा उसले इमोजीहरुको लस्कर जोडेर पठाई । )
“तिम्रो यो कलाकारिताको तारिफ म कसरी गरुँ । “
“जसरी सक्छौ, हाहा”
“मेरोलागि तिमी प्रेमको नयाँ परिभाषा बनेकी छौ ।”
“पुरानो परिभाषा चाहिँ को हो नी ?” (ऊ सार्कास्टिक भई ।)
“हाहा, पहिले मलाई परिभाषा नै आँउदैनथ्यो !”
“मलाई पनि त त्यस्तै भएको छ । जिन्दगी केवल एक ख्यालठट्टा हो, मीठो ख्यालठट्टा जस्तो लाग्छ । तिमीसँग हुँदा, लाग्छ जिन्दगी त एक पलमै बितिजाने छ । तिमीसँग घण्टौं कुरा गर्दा पनि थोरै हुन्छ । “ (अलि समय लिएर उसले लेखी ।)
“लौ देख्यौ तिमीभित्रको कवयित्री नि जाग्यो । ” (उसले पनि इमोजीहरुको लस्कर जोडेर पठायो । )
“हाहा, यो सब तिम्रो प्रभाव हो । “
“तिम्रो बारेमा जति लेख्दा नि थोरै हुन्छ भावना । “
“अनि तिम्रो कुरा जति सुन्दा नि अघाइँदैन, सुरत । “
“तिमी मेरो लागि सबथोक हौ, तिम्रो लागि चाहिँ म के हुँ ?”
“ल भयो, धेरै प्रश्नोत्तर नखेलौँ । मम्मीले बोलाउनु भयो म जान्छु । “
“छुट्टिनलाई कति हतार गरेकी, भोलि उहि पुरानो ठाउँ भेटौँ ल ? “
“भोलि भेट्नलाई अहिले छुट्टटिनुपर्छ । बाई ।”
“लभ यु, बाई !”
एक्लै मुस्कुराउँदै सुरतले मोबाइल तल राख्यो । अचेल उसलाई उसको दैनिकी एक सुन्दर कल्पनाजस्तो लाग्छ । यो नयाँ प्रेमको सुरुवाती साइडइफेक्ट होला शायद !
सुरतको घर बझाङ हो । उसका बुढा आमाबुवा गाउँमै खेतीपाती गर्छन् । ऊ उच्च शिक्षाका लागि महेन्द्रनगर आएको हो । यहाँ ऊ एक कोठा डेरा गरेर एक्लै बस्छ । उसको र भावनाको भेट कलेजमा भएको हो । उनीहरु एकअर्काप्रति धरै नै समर्पित जस्ता देखिन्छन् । कलेज, पार्क, क्याफे त कहिले सुरतको कोठा, उनीहरुको भेट लगभग सधैँ हुन्छ । समयसँगै उमेर बढ्दै गयो, यौवन चढ्दै गयो, प्रगाढता नि बढ्दै गयो । कहिले उनीहरु वर्तमानमा रमाउँथे, कहिले दुबै भविष्य कल्पिँदै रमाउँथे । उनीहरु स्वच्छन्द थिए; प्रेममा लेखाजोखा, बाधा-बन्धन हुँदैन भन्थे । एकहिसाबले उनीहरु टिनेजरस् लभजस्तो कल्पनामै ज्यादा रमाउँथे । बाँकी कुराहरुको परवाह उनीहरुलाई कमै हुने गर्थ्यो ।
सुरतलाई लाग्थ्यो उनीहरु सम्बन्धको यात्रामा कोसौं टाढा पुगिसके र यो यात्रा अनन्त हुनेछ । तर समाजिक बन्धनका कुरुप काँडाहरुले च्वास्स घोचेपछि बल्ल सपनाबाट मान्छे ब्युँझिन्छ र वास्तविकताको सग्लो-अग्लो दिवारमा ठोक्किन पुग्छ । प्रेमको पनि विधान र मापदण्ड हुन्छ जस्तो भान भयो सुरतलाई जब भावनाको घरमा बिहेको कुरो उठ्यो । यो हरेक सम्बन्धयात्राको एक खुड्किलो हो जहाँ प्रेमीहरुको सम्बन्ध-समझ र सम्बन्ध-शक्तिको जाँच हुने गर्दछ । त्यसमाथि हाम्रो समाजले विवाहलाई दुई जनाको मेल मात्र नभई दुई परिवारको मेल भनी केही प्यरामिटर निर्धारण गरेको छ । यसमा जात, वर्ण, ठाउँ, शिक्षा, विचार, आर्थिक स्तिथी आदिको लेखाजोखा हुने गर्दछ ।
सुरत र भावनाको सम्बन्धबारे भावनाको परिवारले सुइँको पाइसकेको अवस्था थियो । सुरतलाई भावनाका आमाबुवाले ठाडै अस्वीकार गरिदिए । यहाँनेर आइपुगेपछि बल्ल प्रेमले पात्रको पहिचान माग गर्यो र समाजले पहिचान नापिदियो ‘जात’ले । यहाँ माथिल्लो र तल्लो जातको पर्खाल नै उनीहरूबीच सबैभन्दा ठूलो अवरोध बन्यो । सुरतले भावनालाई भागेर बिहे गर्ने प्रस्ताव नराखेको पनि होइन तर भावनाले मौन प्रतिक्रिया दिइन् र सुरतका हर प्रश्नहरु निरीह हुन पुगे कमजोर सम्बन्ध र बलियो कुसंस्कार अगाडि । प्रेमले घुँडा टेक्यो समाजिक व्यवस्थाको अगाडि ।
सुरतले हजारौं मेसेज पठायो र सैयौंपटक भेट्ने प्रयास गर्दा पनि भावनाले संवादको ढोका खोलिन-लाइक अ डेड म्यानस् हार्ट । उसको त्यहि बेला प्रेमबाट विश्वास उठ्यो । भावनाको मौनताले उसलाई निहत्था बनायो लड्नलाई । यसरी उनीहरुको प्रेम अनुत्तिर्ण भयो परिस्थितिको परीक्षामा ।
यति भइसक्दा पनि सुरतका आमाबुवा भने अनविज्ञ थिए । सुरतलाई यो एउटा भयानक दुर्घटना लाग्यो र एक्लोपनको महशुस हुन थाल्यो ।
उसलाई अचेल यो तराईको न घाम मनपर्छ, न हावा मन पर्छ । उसलाई अचेल न सम्बन्ध मनपर्छ, न समाज मनपर्छ । उसँग न प्रेमप्रति विश्वास बाँकी छ न सपनामाथि । ऊ कसैको कुभलो नि चाहँदैन, न सदाशयता नै राख्छ । उसलाई भगवानसँग पनि गुनासो छैन । उसलाई न्यायप्रति पनि गुनासो छैन । ऊ अन्तहीन दु:खको कुवा बनेको छ । उसको हृदय चाहनाशुन्य भएको छ । त्यहाँ केवल सन्नाटा छ-लाइक ए डेड म्यानस् हार्ट । मुचुल्का उठाउन पनि केही बाँकी छैन ।
पानीले भिजेपछि पखेटा फडफडाउँदै बसिरहेछन् एक जोडी सिन्टोलाहरु तिनै टुँडिका रुखमा । ऊ सोच्दैछ, यिनीहरुको समाजमा विभेद गर्न मिल्ने कुनै बिभाजन होला कि नहोला ? चराले पनि मिलन विछोडको हेक्का राख्न सक्छ होला त ? चराको चित्त दुख्छ होला त ? चरा पनि रुन्छ होला त ? कास म पनि चरा भएको भए । हुन त हृदय भएरै हरेक प्राणी जिवीत छ । हृदय भइसकेपछि त्यहाँ भावनाहरु अवश्य हुन्छन् नै । भावना भएपछि कुनै पनि संवेग महसुस गर्न सकिन्छ र प्रेम जो सबैभन्दा सुन्दर महसुस हो । वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले ‘मान्छे प्रेममा फस्नुमा गुरुत्वाकर्षण जिम्मेवार छैन’ भनेजस्तै जोकोही प्रेममा पर्न सक्छन् । प्रेम सभ्यता र संसारको अस्तित्व हो । फेरि किन यसले मलाई आघात पुर्यायो । प्रेम चोट हो कि मल्हम हो ? प्रेम शृजना हो कि विध्वंश हो ?”
ऊ एकतमासले तिनै चराहरुलाई हेरिरहेथ्यो । ती भुर्रर उडेर गएपछि बल्ल उसको ध्यान भङ्ग भयो । आँगनमा जमेको पानी घट्दै जाँदैछ । दिन छिप्पिँदै गएपछि यो पानीघामले गर्दा घर बाफिँदै जान्छ । भित्र बस्नेहरु स्टिम हुँदै जान्छन् । ऊ यो गर्मिदेखि पनि आजित छ ।
उसले सोच्छ “यी चराहरु पनि किन गर्मी खान यहाँ बसिरा’होलान? पँखेटा भएपछि उडेर कतै डाँडातिर जानु नि !”उसलाई आज ऊ वरिपरिका हरेक कुराले सोचमग्न बनाइरहेछन् । तर यी चराहरु त रमाइरहेकै जस्ता देखिन्छन् । मुग्ध छन् वातावरणदेखि । सोच्नु सोचिरहनु !ऊ सोच्नबाट आफूलाई रोक्न सक्दैन ।
ऊ एकपल्ट हातमा बाँधेको घडी हेर्छ । ऊ हातमा सधैँ घडी लाइरहन्छ तर प्राय: समय हेर्नुपरे मोबाइल झिक्छ । यो मोबाइल मोहनीको समान्य उदाहरण हो । तर उसले आज घडी हेर्यो; घडी त चलिरहेकै पो छैन । आठ बजेको देखाइरा’छ-कहिलेदेखि बिग्रेको थाहा छैन उसलाई । तर “समय शायद ठिकै देखाइरा’छ”, उसले सोच्यो, “बिग्रेको घडीले नि त दिनमा दुई पटक सही समय देखाउँछ । “
“समयले अझैपनि घडीलाई प्रेम गर्छ । ती रुखहरु एक्ला छैनन्, तिनमा चराका गुँड छन् । तिनका पातलाई स्पर्श गर्न हावा कति दूरदेखि बहँदै आउँछ । यो ताललाई भ्यागुताहरुले प्रेम गर्छन् । मौसमलाई पर्यावरणले प्रेम गर्छ । घाम र बादल दिनभरि लुकाछिपी खेलिरहन्छन् । यो प्रकृति प्रेमालय हो । प्रेम अविनाशी हो । सम्बन्ध असफल हुन सक्छ, प्रेमी असफल हुन सक्छन तर प्रेम असफल हुँदैन । मलाई चोट दिने प्रेम होइन, महत्वाकांक्षा हो । मलाई यो रुखले छाँया दिएर प्रेम गर्छ । मलाई यो वर्षाले गर्मीमा शितल दिएर प्रेम गर्छ । मलाई चराहरुले पनि प्रेम गर्छन् । मलाई भ्यागुताहरुले पनि प्रेम गर्छन् । यो ब्रह्माण्डले सबलाई उत्तिकै प्रेम गर्छ । प्रेम अझै अस्तित्वमा छ । म अझै भावनालाई प्रेम गर्न सक्छु । भावना अझै मलाई प्रेम गर्छे । जिन्दगीमा उकाली-ओरालीले जिन्दगी सिकाउँछ । जिन्दगीले ओरोह-अवरोहलाई पनि प्रेम गर्छ । “
ऊ सोचहरुको लहरीमा बेरिइरहेको छ । उसका सुस्केराहरु ऊ आफैभित्र प्रतिध्वनित भइरहेछन् । उसको अवचेतनमा एक चेत बल्यो । उसले देखेको सपनामा बग्दै आइरहेका अस्पष्ट दुई आकृतिहरु कोही नभएर उसका आफ्नै आमाबुबा भएको भान भयो । बग्दै आइरहेका मानिसहरु उसका आफन्त, साथीभाई, शुभचिन्तक भएको एक चित्र उसको आँखामा छापियो । उसका आँखाबाट दुई थोपा आँसु तपक्क तप्किए ।
उसले बल्ल महशुस गर्यो ऊ आफ्ना गोडामा थकान बिसाएर, मनमा नैराश्य थन्काएर ऊ स्वप्रेम पतित गरिरहेछ । उसले बल्ल आफैलाई सुन्यो ।
उसले महशुस गर्यो उसको पेट भोकले क्याउँक्याउँ गरिरहेछ । उसले केही दिनदेखि केही खाएको थिएन । उसको भोक हराएको थियो । उसले एक थोपा पानीसम्म पिएको थिएन । उसको आँत भरभराउन थाल्यो, मुख घाँटी प्याकप्याकी भए । यो महसुस उसलाई बल्ल भयो । “प्रेम बहुआयामिक छ तर हामी त्यति मात्र ठिक ठान्छौ जति हाम्रो दिमागलाई लाग्छ र त्यति मात्र सोच्छौ जति मनले सोच्न चाहन्छ । ” ऊ सोचहरुले भनभनिँदै घर भित्र पस्यो । किचन र्याक तिर केही छ कि भनी खोज्यो । तर कोठाभित्र केवल खराब गन्ध फिजिएको थियो ।
त्यसैबेला उसको खुट्टा एक खाली सिसीमा ठोकियो, ट्वाङ्ङ आवाज आयो । दुई औंलाले नाक थिच्दै उसले त्यो सिसी उठाउनै लाग्दा खाटमा लम्पसार पल्टिरहेको आफ्नै ज्यानलाई देख्यो । मुखबाट बगेको फिँज सुकेर गालामा ट्याम्म टाँसिएको थियो । थरथर काँप्दै ऊ आफ्नो नजिक गयो । ऊ त आफूलाई आफै डुङ्डुङ्ग्ती गन्हाइरहेको रहेछ ।
The Suicide by Edouard Manet
उपाध्यायलाई विद्यापति मैथिली भाषा साहित्य पुरस्कार